(चन्द्र शमशेर बाट पठाईएको)
देव शमशेरका सुधारवादी कार्यले गर्दा नेपाल अधिराज्यका सर्वसाधारण नागरिकमा चेतनाको जागरण भई आफ्नो तथा आफ्ना भाइभतिजाहरूको स्वार्थमा आघात पर्ने अनुभव गरि यिनका उत्तराधिकारी कमान्डर इनचिफ जनरल चन्द्र शमशेर यिनले आरम्भ गराएका यस्ता सुधार कार्यदेखि सतर्क भए। यिनका यस्ता कदम शमशेर परिवारका राणाका निम्ति रूचिकार थिएन। नेपाल अधिराज्यको राज्य प्रशासन श्री ३ महाराज देवशमशेरको नियन्त्रणमा रहिरहेमा अधिराज्यका सर्वसाधारण नागरिकमा चेतनाको जागरण भई आफ्नो तथा आफ्ना भाइभतिजाहारूका निम्ति ठूलो खतरा आइलाग्ने निश्चय गरि चन्द्रशमशेरले पहिले "खड्गशमशेर पर्व"मा जसले आफूलाई स्नेहपूर्वक जोगाइदिएका थिए, सरल र शान्त स्वभावका तिनै दाजु प्राइममिनिस्टर देवशमशेर राणालाई पदच्युत गराई स्वयम् नै प्राइममिनिस्टर तथा श्री ३ महारज पनि बन्ने योजनाका तानाबाना बुन्न अग्रसर भए।
उनी प्रधानमन्त्री भएपछि बृटिसले तिब्बत माथी हमला गर्न योजना बनाए । चन्द्र शमशेरले त्यो कार्यमा पूर्ण सहयोग गरे। हुन त थापाथली सन्धि अनुसार नेपालले त्यस्तो गर्न हुदैनथ्यो । चन्द्र शमशेरको त्यो कदम पछि उनले बेलायत भ्रमण गर्ने मौका पाए । चन्द्रशमशेरको बेलायत भ्रमण सन् १९०८ मा भएको थियो ।
अड्डामा जो हाकिम भयो उसैका नातेदार, चाकडीदारहरू उक्त अड्डामा भर्ना हुन्थे . सो प्रवृत्तिको अन्त्य गर्न चन्द्र शमशेरले सरकारी अड्डामा नियुक्त हुन चाहनेले परिक्षामा उतीर्ण हुनुपर्ने नियम बनाई कर्मचारी तयार पार्ने स्रेस्ता पाठशाला खोले. स्रेस्ता पाठशालाको पाठ्यक्रम समयानुसार अलिअलि फरक पर्दै पनि गयो.
चन्द्र शमशेरको समयको मध्य काटिरहँदाको अवस्थामा विश्व, खासगरी भारतीय उपमहाद्विपको राजनीतिक वातावरणमा उल्लेख्य भिन्नता आउन थाल्यो। पहिलो विश्वयुद्धमा डेढलाख बढी नेपाली लाहुरेहरू विश्वका विभिन्न भागमा पुगेर फर्केपछि तिनले गाउँ गाउँमा आफूले ठाउँ ठाउँमा देखे-भोगेको ज्ञानगुन र चमत्कारका कुरा सुनाउन थाले। भारतमा पनि वि्रटिश विरुद्धको स्वतन्त्रता संग्राम उल्लेख्य मात्रामा बढेर गयो। यो अवस्थामा नेपाली विद्यार्थीलाई पढाइका लागि भारत पठाउँदा त्यहाँको चेतवाट दीक्षित भएका युवा विद्यार्थीले नेपालको आफ्नो जहानिया शासनमा घातक प्रभाव पार्न सक्ने भएपछि कूटिल प्रधानमन्त्री चन्द्र शमशेरले नेपालमै उच्च शिक्षा हासिल गर्न सकिने व्यवस्था बाँध्ने निश्चित गरे। परिणामतः त्रिचन्द्र क्याम्पसको स्थापना भयो।
प्रधानमन्त्री चन्द्रशमशेर को पालामा ग्याल्पो काण्डले पुन: नेपाल भोट युद्ध हुन लागेको थियो तर त्यसको तयारी हुदाहुदै श्री ३ चन्द्रको स्वर्गवास भयो। पछि अंग्रेजको मध्यस्ततापछी सो युद्धको सम्भावना टर्यो ।
"https://ne.wikipedia.org/w/index.php?title=चन्द्र_शमशेर_जङ्गबहादुर_राणा&oldid=1000203" बाट अनुप्रेषित
अन्तिम सम्पादन २ अप्रिल २०२१, ११:४६
यो पृष्ठलाई अन्तिमपटक ११:४६, २ अप्रिल २०२१ मा परिवर्तन गरिएको थियो।